अराजक शब्दहरु: 09/16/18
दूधले नुहाएको को नै छ र ? -शान्तराज सुवेदी
निजामती कर्मचारी भनेका स्थायी सरकार हुन् । निजामती अर्थात प्रशासन संयन्त्र भनेको स्थायी किसिमको हो । सँधै स्थायी रुपमा बस्ने, स्थायी रुपमा काम गर्ने, स्थायी रुपमा नागरिकको सेवा गर्ने र नागरिकको पिरमर्का बुझ्ने संयन्त्र भएकाले राष्ट्रसेवकहरुको संयन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो । राजनीतिक दलको निर्वाचित सरकार होस् वा नहोस् यो चाहिँ सधैं रहिरहन्छ ।
नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध सेतुको काम गर्ने हुनाले निजामती सेवाको झनै ठूलो महत्व छ ।
पछिल्लो समयमा निजामती सेवाप्रति नागरिकको हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन भन्ने कुरो केही हदसम्म सहि हो । निजामति मात्रै होइन सुरक्षा संयन्त्रमा काम गर्ने तथा सबै राष्ट्रसेवक प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही नकारात्मक सन्देश गएकै हो । यति ठूलो संस्थामा सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन । केही कर्मचारीको काम गर्ने तौर तरिका, नागरिकलाई दिने सेवा तथा कर्मचारीमा आउने नकारात्मक अपेक्षाले गर्दा छवि केही धुमिलिन खोजेको पक्कै हो ।
आर्थिक र नैतिक रुपमा चुकेका, सेवा प्रवाहमा ढिलाई र नागरिकलाई झुलाई मात्र रहने प्रवृत्तिका केही कर्मचारीका कारण समग्र निजामती तथा राष्ट्रसेवकलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक अवस्थामा पुगेको । तर सबै निजामती कर्मचारी वा राष्ट्रसेवक कर्मचारी खराब छन् भन्ने होइन । बरु केही खराब प्रवृत्तिका कर्मचारीका कारण संस्थाको गरिमामा केही धुमिल आउन खोजेको हो कि।
निजामती सेवाका कर्मचारीहरु विभिन्न संघसंगठन तथा कुनै राजनीतिक संगठनसँग आवद्ध हुने, निश्चित कर्मचारी राजनीतिक आवरणमा सम्पर्क बढाएर शक्तिकेन्द्रको नजिक हुने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने खालका पनि छन् ।
राजनीतिक संयन्त्रले कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा त्यो काम नीतिगत छ कि छैन भन्ने बारेमा पहिला राजनीतिक संयन्त्र स्पष्ट भइदिए काम गर्न सहज हुन्छ । यदि साँच्चै राम्रो उद्धेश्यले काम गर्न थालिएको छ, तर कर्मचारी बाधक बन्छन भने त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ ।
हाम्रा काम गर्ने तौर तरिका तथा हाम्रा ऐन, नियम पनि नतिजामुखी होइन कि प्रकृयामुखी छ । कुनै काम गर्दा पहिला प्रकृया पुर्याउनु जरुरी हुन्छ । अहिले रहेको प्रकृयामुखी ऐन, कानुन सुधार गरेर नतिजामुखी बनाउनु जरुरी छ । कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले चाहेर पनि सरकारको काममा असहयोग गरौं अथवा यो काम नगरौँ भन्छन् जस्तो मलाइ लाग्दैन ।
ढिलासुस्ती गर्ने, अटेर गर्ने र नीति नियम पालना नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर अघि बढ्दा नै निजामति संस्थाको गरिमा बढ्न जान्छ ।
अब हामीलाई चाहिएको भनेको सुधारिएको निजामती सेवा हो । अर्थात नागरिकको हितमा काम गर्ने निजामति सेवा चाहिएको हो । सेवा चुस्त बनाउन अब डिजिटल सेवा अर्थात अनलाईन सिस्टमलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । यस्तै नागरिकले सेवा सुविधा पाए नपाएका बारेमा गुनासा सुन्न सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
अब सम्पूर्ण सेवा प्रवाह स्थानीय तहबाटै हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व अब कर्मचारीमा मात्रै निहीत छैन । जनप्रतिनिधिको दायित्व पनि उत्तिकै छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिले जति राम्रो काम गर्नुहुन्छ, कर्मचारी आफै पनि राम्रो काम गर्न बाध्य बन्छन् ।
अहिले निजामती सेवामा झण्डै ९० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारीलाई हौसला प्रदान गर्ने सवालमा, राम्रो र नतिजामुखि काम गर्नुपर्छ र यस्तो काम गर्दा पुरस्कृत भइन्छ भन्ने सन्देश दिन पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्नुपर्ने थियो । कतिपय अवस्थामा सर्वोत्कृष्ट पाउन दावी गर्ने हकदार पनि धेरै हुनु र छनौट गर्ने समितिले पनि जोखिम लिन नचाहनुले यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारी छनौट गर्न नसकिएको हो ।
हुन त दूधले नुहाएको को नै हुन्छ र ? राम राज्य संसारमा कहीँ पनि छैन । व्यक्तिमा कुनै न कुनै सामान्य कमिकमजोरी त हुन्छन् नै । केही पनि नभएको व्यक्ति हुन्छन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । भएकामध्येबाट राम्रो छान्ने हो । भएकामध्येबाट छानिएका र बाँकी रहेकासँग तुलना गर्दाखेरी त्यो मान्छे राम्रो देखिए त्यसलाई नेगेटिभ लिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
समृद्धि र सुशासनका लागि काम गर्ने नै प्रशासन हो । राजनीतिज्ञले सपना देख्ने हो । त्यो सपनालाई सफलिभूत पार्ने कार्म प्रशासनको हो । नीति राजनीतिज्ञले बनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयन मात्रै प्रशासनले गर्छ । प्रशासन संयन्त्र सक्षम, गतिशील, तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यो सम्बन्ध भनेको व्यवसायीक, दक्षतापूर्ण हुनु पर्छ ।
रुख खेती कि फडान ? निजगढ विमानस्थलको नाउमा
निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि रुख काटिने गरी याेजना तयार छ । मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नै प्र्ष्टाउन खोजेपछी अब बन्नेछ ।
हो विमानस्थल बन्नुपर्छ तर अधिकाधिक पर्यावरण र भूराजनैतिक अवस्थालाई विचार पुर्‍याएर । कुनैपनि संरचना निमार्ण हुँदा मानव वस्तिलाई असर पर्ने गरी वा विस्थापन गरेर गर्नुभन्दा यो उत्तम विकल्प हो । विकास हुँदा विनास हुने पनि सत्य हो । तर विनास कम गर्न सकिन्छ वा क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । सरल तरिकाले र नागरिकलाई चित्त बुझाएर ।
अहिलेको नागरिक संशय विकास विरोधी भन्दा पनि विमानस्थलका नाममा गरिने रुख फडानी र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा कहाँ कहाँ पुग्ने हो भन्ने हो । विकासका नाममै अनावश्यक रुख काट्ने र गोजी भर्ने हुन कि भन्ने संशय हो । यसको यौटै समाधान भनेकै उत्तरदायीपूर्ण विकास मोडेल हो । जसमा राज्यको जिम्मेवारीपना र जवाफदेहिता त जोडिन्छ नै सँगसँगै राष्ट्रिय गौरवका योजनामा देखिएका विगतका विसंगति नदोहोरिने आश्वस्तता अरु बढि मुखरित हुनुपर्दछ ।
२४ लाख रुख काटिनु ठुलो र प्रलयको विषय होईन । विषय मुख्य के हो भने रुख रोपेपछी काट्नै हुन्न भन्ने निम्छरो र मुढ मानसिकताका कारण हामि विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैन । रुख काट्नुपर्छ । लगाउनुपर्छ । बेच्नुपर्छ । आय आर्जन गर्नुपर्छ । कागजमा २५ रुखले प्रतिस्थापन गरिने कानूनको पाना देखाउनु पुर्व विगतमा भएका यस्ता सम्झौता आयोजनाहरुले कत्तिको पुरा गरे त्यो देखाउनुपर्छ ।
जबसम्म रुख रोपण र त्यसको विक्रि वितरण गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैन । बुढा रुख पालिरहने र अनन्तकालसम्म नकाटिने प्रथाका हामि दास हुनेछौ । त्यसपछि रुख काटिएकोमा न नागरिक विरोधमा उत्रनेछन् न अायोजना सञ्चालन गर्नेलाई आयोजनास्थलमा रुख परेपछी त्यसलाई हटाउन अनेकन पापड बेल्नुपर्ने छैन । यस्तै पापड बेलन गाह्रो भो भनेर फेरी पनि सेनालाई जिम्मा लगाउनु परेको छ । सेना अन्तिम विकल्प हुँदासम्म कार्यान्वयन गर्ने निकायको निकम्मापन पुष्टि भैरहनेछ ।
फेरीपनि विमानस्थल आवश्यक छ । नमूना नै बन्दा अझ राम्रो । समयमा बन्नु आवश्यक । समय तालिकाको आधारमा अनुगमन र जिम्मेवार बनाउन अनुगमन गर्ने निकाय प्रतिवद्द हुनु पर्ने त छदैछ । विमानस्थलको नाममा रुखलाई दुहुनो गाई बनाउने र देखाउने ६ हजार वयस्क रुख तर यथार्थमा कति कटान हुने भन्ने विश्वास नागरिकमा भइरहँदासम्म यस्ता विरोध आइरहन्छन् । गोजी भर्नेले भरिरहन्छ ।
@ॐ कारेश्वर मार्ग पुरानोबानेश्वर काठमाडौ
अराजक सान्निध्य (Nepsasa) at 6:15:00 AM No comments: